Maxbuuskan ayaa ka baxsanaya jeexjeexa loogu talagalay in lagu gudbiyo saxamada cuntada ... (VIDEO) | KONGOLISOLO
Maxbuuskan ayaa ka baxsaday boorsada loogu talagalay in lagu gudbiyo saxamada cuntada ... (VIDEO)
Posted By: KongoLisolowaa: Sebtember 4, 2016 13: 47 No Comments
Rustam Shakhrutdinov, 25, wuxuu sugayay maxkamad xatooyo wuxuuna ku xirnaa xabsiga Izberbash (Dagestan, Jamhuuriyadda Caucasian).
Waxaa loogu magac daray "masaska nin" ee shabakadaha bulshada, Rustam wuxuu ku guuleystey inuu ka baxsado isaga oo maareynaya inuu ka gudbo sagxadda loogu talagalay in lagu gudbiyo saxamada cuntada. Kaamirooyinka isha lagu hayo, waxaa suurta gal ah in la arko ninku iswada socda muddo ilbiriqsiyo aad u dheer kahor inta uusan gaarin ujeedadiisa. Lama oga in ilaa iyo hada la helay ama in booliiska Ruushku wali raadinayaan isaga.
Hase yeeshe, kormeerku uma muuqdo inay tahay mudnaanta dhismayaasha dib-u-habeynta Dagestan.
Nidaamka Maraykanku ma shaqeeyo sidii loo baahan lahaa waan ka xumahay haweeneyda saboolka ah ... (VIDEO)
Sep21 12: 09